जाजरकोटमा कुन दलको अवस्था कस्तो ? – Vision Khabar
जाजरकोटमा कुन दलको अवस्था कस्तो ?
। २५ आश्विन २०७४, बुधबार १४:०२ मा प्रकाशित
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन मिति नजिकिदै गर्दा राजनीतिक दलहरुले उम्मेदवार छान्ने कसरत अन्तिम चरणमा पुर्याएका छन । आम जनमानसमा भने कुन दलले कसलाई उम्मेदवार बनाउला ? कसले जित्ला चर्चा परिचर्चा शुरु भइसकेको
छ । राष्ट्रिय राजनीतिमा बाम गठबन्धन भएपछि झनै जनतामा चासो बढेको देखिएको छ । यस्तै विभिन्न दलका चुनावि तालमेलले के प्रभाव पार्ला ? चाँसोको विषय बनेको छ । गाँउ देखी बजार सम्म चुनावी बहस शुरु भएका छन् ।
आगामी मंसिर १० र २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको छलफल हिजो आज जाजरकोटका चिया चौतारीमा पनि चलीरहेका छन् । यहाँका गाँउ तथा सहरमा विभिन्न उम्मेदवार र दलको चर्चा चुलिएको छ । आगामी निवार्चनको सम्भावित परिणाम कस्तो होला त ? अहिले नै अनुमान र अड्काल शुरु भइसकेका छन । भरखरै सम्पन्न स्थानिय तह निवार्चनको मत परिणामलले र राजनीतिक गठबन्धनले अनुमानलाई बलियो बनाउदै लगेका छन ।
जाजरकोटका २ निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रत्यक्ष मार्फत २ जना प्रदेशसभा सदस्यले र प्रतिनिधिसभाका लागि १ प्रतिनिधिसभा सदस्यले प्रतिनिधित्व गर्नेछन् । स्थानिय निर्वाचनलाई आधार मान्ने हो भने एमाले अग्रपङ्तिमा देखिन्छ । उसले ७ वटा तह मध्ये ३ स्थानिय तहमा जित हाँसिल गरेको छ भने काँग्रेस र माओवादी केन्द्र समान २/२ तह जितेका छन् ।
पपुलर मतका हिसावले पनि एमाले अगाडि देखिन्छ । उसले सबै स्थानिय तहबाट २० हजार ६ सय मत ल्याएको छ भने १८ हजार ४ सय ३९ मतका साथ काँग्रेस दोस्रो स्थानमा रह्यो । त्यस्तै १७ हजार ४ सय ६१ मतका साथ माओवादी केन्द्र तेस्रो भयो । कुल जिल्लाका ७८ वडा मध्य २९ वडा एमालेले जितेको छ भने २६ वडा काँग्रेस र २३ वडा माओवादी केन्द्रले जितेका छन ।
वाम एकता र दलहरु विचको चुनावी तालमेलले पनि अहिले राजनितिक बजार तताएको छ । बाम एकता र तालमेल भयो भने चुनावि माहोल कस्तो होला अहिले जनमानसमा चासोको विषय हो । तालमेलको नतिजा कस्तो आउला स्थानिय तह निर्वाचन नतिजाको आधारमा अनुमान सहितको विश्लेषण गरिएको छ । यसलाई निर्वाचन क्षेत्रको आधारमा यसरी प्रस्ट्याउने प्रयास गरिएको छ ।
क्षेत्र नं. १ः
क्षेत्र नं. १ भेरी नगरपालीका, त्रिवेणी नलगाड नगरपालीका, बारेकोट गाँउपालीका र कुसे गाँउपालीकाका वडाहरु क्रमश ५,६,७,८,९ मिलाएर बनाइएको छ । यो क्षेत्रको स्थानिय तह निर्वाचनको नतिजा हेर्ने हो भने पपुलर मतका आधारमा तिन वटै ठुला दलको कडा प्रतिस्पर्था देखिन्छ । यद्यपी काँग्रेस १० हजार २ सय ८१ मतका साथ अगाडि देखिन्छ भने एमाले १० हजार २ सय ११ का साथ दोस्रो र १० हजार ८६ का साथ तेस्रो स्थानमा छ । यो आँकडाले वाम गठबन्धनलाई फाइदा पुग्ने देखीन्छ । यस क्षेत्र बाट नेपाली काग्रेसले बेदराज सिंहलाई उमेदवार चयन गरेका कारण चुनाब जित्ने स्थानिय नेताले दावि गरेका छन् भने माओवादी केन्द्रले गणेश बहादुर सिह लाई चयन गरेको छ र एमालेले चार जनाको नाम सिफारिस गरेको छ यध्यपी वाम एकताको कुराले माओवादी केन्द्र र एमालेको संयुक्त उम्मेदवार हुने र कुन दलले टिकट पाउने भन्ने कुरा छलफलमै रहेको र बाम गठबन्धनले यो क्षेत्र सजिलै जित्ने आँकलन गर्न सकिन्छ ।
क्षेत्र नं. २ः
क्षेत्र नं. २ छेडागाड नगरपालिका, शिवालय गाँउपालिका, जुनिचाँदे गाँउपालिका र कुसे गाँउपालिकाका वडाहरु क्रकश १,२,३,४, मिलाएर बनाइएको छ । यो क्षेत्रको स्थानिय तह निर्वाचनको नतिजा हेर्ने हो भने एमाले पपुलर मतका आधारमा अग्र स्थानमा देखिन्छ उसले १० हजार ५ सय ३६ मत पाएको छ । त्यस्तै नेपाली काँग्रेस ९ हजार १ सय २६ मतका साथ दोस्रो र ७ हजार १३ मतका साथ माओवादी केन्द्र तेस्रो स्थानमा छ । यसलाई आधार मान्ने हो भने एमालेको यो क्षेत्र राम्रो पकड भएको क्षेत्र हो ।
वाम गठबन्धनले झन यो क्षेत्रलाई मजबुत बनाएको स्थानियको बुझाई छ । यस क्षेत्र बाट नेपाली काग्रेसले जिल्ला सभापति दिपक जंग शाहलाई उम्मेदवार चयन गरेको छ । त्यस्तै माओवादी केन्द्रले नर बहादुर कार्कीलाई चयन गरेता पनि बाम गठबन्धनको संयुक्त उम्मेदवार को हुने भन्ने टुङ्गो लागेको छैन र यो क्षेत्र पनि बाम गठबन्धनले जित्ने प्राय निष्चित छ । यध्यपी काँग्रेसले पनि आफु जित्ने दावी गरेको छ ।
केन्द्रका लागि जाजरकोटबाट एक जना प्रतिनिधि सभा सदस्यले प्रतिनिधित्व गर्नेछन् । जिल्लाको स्थानिय तह निर्वाचनलाई आधार मान्ने हो भने माथी मत उल्लेख भएझै एमाले पहिलो स्थानमा छ । नेपाली काँग्रेस र माओवादी केन्द्र क्रमश दोस्रो र तेस्रो स्थानमा छन् । केन्द्रमा पनि वाम गठबन्धन (एमाले, माआवादी केन्द्र र नयाँ शक्ति नेपाल) ले स्थानिय तह निर्वाचनमा पाएको पपुलर मत हेर्दा वाम गठबन्धनको पल्ला भारी देखिन्छ । नेपाली काँग्रसले लोकप्रिय नेता राजिब विक्रम शाह लाई उम्मेदवारमा सर्वसम्मत सिफारीस गरेकाले चुनाब आफुले जित्ने नेता तथा कार्यकर्ताको दावि छ । उता बाम गठबन्धन बाट उमेदवारको टुङ्गो नलागे पनि पुर्व गृह मन्त्री शक्ति बस्नेतको नाम चर्चामा छ र माओवादी केन्द्रले बस्नेतको नाम सिफारीस गरेको छ भने एमालेले तिन जना भैरव सुन्दर श्रेष्ठ, गोविन्द विक्रम शाह र रीता रावलको नाम सिफारीस गरे पनि गठबन्धनबाट एक जना साझा उम्मेदवार हुने देखिन्छ । त्यसो हुदा गठबन्धनले सजिलै चुनाब जित्नेमा दुबै दलका नेता कार्यकर्ता ढुक्क छन् ।
स्थानिय तहको निर्वाचन पछि जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा चार हजार बढी नयाँ मतदाता थपिएका छन् । उनिहरुको मत कुृन दललाई कति जाने हो भन्ने आँकलन गर्न नसकिए पनि जाजरकोटमा बाम गठबन्धनलाई फरक नपर्नेै देखिन्छ ।